रोचक बिचित्र – Page5– JanaSanchar.com
अनुहारमा रजश्वलाको रगत किन पोतिन् यी युवतीले ?
महिलाको रजश्वला चक्रका सम्बन्धमा समाजका रहेका विभिन्न खाले मान्यताहरुलाई चिर्नका लागि एक अष्ट्रेलियन युवतीले अनौठो उपाय अपनाइन् । अष्ट्रेलियाकी २६ वर्षीया याजमिना जेदले जुन कदम उठाइन्, त्यसले अहिले एकाएक चर्चा कमाएको छ । उनले आफ्नै रजश्वलाको रगत अनुहारमा पोतेर सेल्फी खिचिन् र सोही सेल्फी सोसल मिडियाबाट सार्वजनिक गरिन् । उनले..
१४ बर्षको उमेरमा सेक्सको अनुमति दिइनु कति सही ?
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जालमा महिला तथा पुरुषहरुले आफ्नो किशोरावस्थाको तस्विरहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यो मार्फत उनीहरुले १४ बर्षको बालबालिका आफ्नो सहमति दिनका लागि निकै सानो भएको कुरा जाहेर गरि रहेका छन् । #MeAt14 अभियान वाशिङ्टन पोष्टको एउटा खबरको प्रतिक्रिया स्वरुप जन्मिएको थियो । यसमा अलबामाका सीनेट पदका उम्मेदवार रोय मोरेमाथि आरोप..
कसरी भयो यस्तो चमत्कार ? मरेको १० दिनपछि महिलाले जन्माइन् बच्चा !
१० दिनअघि मरिसकेकी एकजना महिलाले बच्चा जन्माएको खबरले दक्षिण अफ्रिकामा तहल्का मच्चाएको छ । १० दिन पहिले मृत्यु भएकी महिलाको अन्त्येष्टिका लागि कफिन खोल्ने क्रममा महिलाको शवसँगै नाबालक शिशुको शव समेत देखिएपछि महिलाले मृत्युपछि बच्चा जन्माएको खुलासा भएको हो । दक्षिण अफ्रिकाको म्थ्यासी गाउँकी ३३ वर्षीया नामभेलिसो नामासोन्तो म्दोयी..
खोकी पनि कति कडा ! करङ नै बाहिर निस्कियो
रुघाखोकी लागेको बेला खोक्दा खोक्दा छाति नै दुखेको अनुभव त धेरैले गरेकै छौँ होला । तर एकजना महिलालाई यति खतरनाक खोकी लागेको छ की त्यो सुन्दैमा डर लाग्छ । ६६ वर्षकी ती महिलाले खोक्दा खोक्दै जोडले उनको करङको हड्डी नै भाँचिएको छ । अमेरिकाको म्यासाच्यूसेट्स राज्यमा बस्ने ती महिलालाई कडा खोकी लागेको थियो र खोक्दाखोक्दै छातिको दायाँ भागमा..
कुन उमेरमा सबैभन्दा बढी सेक्सबाट आनन्द पाइन्छ ? यस्तो छ रोचक तथ्य
सामान्यतया कुरकुरे बैँश अर्थात् किशोरावस्थाको समयमा मान्छे सेक्सको विषयमा सबैभन्दा धेरै उत्सुक हुन्छ र त्यस्तो कौतुहलताको उमेरमा गरिने सेक्समा उसले सबैभन्दा धेरै सन्तुष्टी पाउँछ होला भन्ने आमधारणा सही होइन । महिलाहरुको हकमा २८ वर्षको उमेरमा गरिने सेक्स सबैभन्दा आनन्ददायक हुने पछिल्लोपटक गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ तर पुरुषको..
‘जब यूट्यूबमा आफ्नै सेक्स टेप देखेँ’
यूट्यूबमार्फत आफ्नो गीत सार्वजनिक गरेर चर्चामा आएकी क्रिसी चेम्बर्सले पूर्व प्रेमीले गोप्य सेक्स टेप अनलाइनमा सार्वजनिक गरेपछि आफ्नो जीन्दगीमा परेको नकरात्मक असर बारे बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘यो घटनाले मेरो जिन्दगीमा हरेक क्षेत्रबाट असर पारेको छ । आगामी दिनमा पनि यसको असर मलाई परिरहनेछ ।’ पूर्व प्रेमीबिरुद्ध चार वर्षसम्म..
चीन र जापानबीचको तनाव मत्थर पार्ने यी जापानी पोर्नस्टार
जब जापानी अभिनेत्री तथा पूर्व पोर्नस्टार सोरा अओइले अनलाइनमा आफ्नो विवाहको घोषणा गरिन्, चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा यसले तहल्का नै मच्चायो। नयाँ वर्षको दिन अओइले आफ्नो ‘इन्गेजमेन्ट’ को औँठीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिन् र विश्वभरका आफ्ना प्रशंसकसामु खुसीको खबर बाँडिन्। ४८ घण्टाभित्रै वेइबोको उनको सो पोस्टमा एक लाख ७० हजारभन्दा..
सुरु भयो अनौठो व्यवसाय, अब भाडामा यौन खेलौना
उत्पादनको अहिलेको युगमा चीनको दबदबा हुनुको एउटा कारण के हो भने उसले उपभोक्ताको माग र चाहना अनुसारका हरेक खालका वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँदछ । साथै ग्राहकको खल्तीको रकम अनुसारका प्रडक्ट बजारमा ल्याउँछ उसले । चीनमा एउटा कम्पनीले हालै भाडामा सेक्स डल ग्राहकलाई दिने व्यवसाय सुरु गरेको छ । बेइजिङको एक सेक्स प्रडक्ट रिटेल कम्पनी टचले..
एजेन्सी । भारतको उडिसामा होस्टलमा रहेकी एक छात्राले बच्चा जन्माएपछि दुई जना शिक्षकलाई गिरफ्तार गरिएको छ । छात्राले बच्चा जन्माएपछि स्कुलका प्रधानाध्यापक र होस्टल सुपरिटेन्डेन्टलाई गिरफ्तार गरिएको हो । दुवैजनालाई घटनाका बारेमा जानकारी नदिएर प्रशासनबाट लुकाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । सरकारी तवरबाट सञ्चालित उमुरी आश्रम नामको उक्त..
एक महिला जासुसको ‘खतरनाक’ प्रेमकथा
काठमाडौँ– सन् १९८६ मा संसारका सबैजसो पत्रिकामा इजरायलले गोप्यरुपमा आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको समाचार प्रकाशित भयो । ती समाचारमा इजरायलले अनुमान गरिएको भन्दा निकै ठूलो परिमाणमा परमाणु कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो । बितेको १० वर्षअघिदेखि गोप्य रुपमा सञ्चालन गरिएको परमाणु कार्यक्रमका बारेमा..